Guyyaa Gootota Oromoo waaltinaan Yaadatame
Date: April 20, 2014Author: Oromedia 0 Comments
(Oromedia, 20 Ebal 2014) Guyyaan Gootota Oromoo biyyoota addaddaa keessatti bifa hoo’aatiin kabajamaa jira.
Ayyaanni Yaadannoo Gootota Oromoo kun USA, Canad, Germany, Norway, UK, Africa, fi Oromia keessatti bifa waalta’een kabajamaa jira. Odeffannoon karaa garaa garaa tamsaasama ajiru akak hubachiisutti, sabboontoti oromoo biyya jiran mara keessatti gurmaa’uun ayyaana Yaadannoo Gootota Oromoo sadarkaa olaanaatti kabajamaa jira.
Australia magaalaa Melbourne keessatti guyyaa kun Ebla 19, 2014 waaree booda magaalaa Melbourne keessatti sirni kun gootota wareegaman yaadachuu fi haala qabsoon Oromoo keessatti argamu hawaasaaf ibsuun akka yaadate gabaasan keenya ibsee jira.
Guyyaa yaadannoo kana irratti akka ibsametti guyyaan gootota Oromoo mallattoo tokkummaa fi diddaa Oromoo ti.
Ayyaana Yaadannoo Gootota Oromoo melbourne keessatti kabajame irratti Ittaanan Hayyu duree fi gaafatamaan Damee Dantaa Alaa ABO, Ob Bultuma Biyyuu sirna kana irratti ibsa kennaniin, qabsoon Oromoo rakkoolee hedduu keessatti mirgoota jajjaboo galmeessaa akka jiru ibsan.
Ummati Oromoo bakka jiru irraa galii dhumaa bira gahuuf waan haga yoonaa goonfate jabeeffachaa ka hafe itti guutachuuf tarkaanfachuu akka qabu dabalanii ibsaniiru.
Akka gaabaasaalee nu gahaa jirutti, guyyaan gootota Oromoo baranaa biyya Norwey magaal Osloo keessattis sirna hoo’aan kabajameera.
Ayyaanni guyyaa gootota oromoo kun, haaluma walfakkaatuun biyya Masirii keessatti sirna hoo’aan kabajamee jira.
Ayyaanni kun guyyaa har’aa illee biyya Kanaadaa keessatti kabajamaa akka jiru beekameera.
Ayyaannu Kun USA, Magaalaa Lakkuuttis bifa hoo’aa fi dammaqiinsa qabuun akka kabajame odeessi achi arganne ibsee jira.
Akka odeeffannoo arganneetti, Barattooti Oromoo Yuuniversitii Wallaggaa guyyaa kaleessaa Magalaa Laqamtee Keessatti Guyyaa Gootota Oromoo Kabajuun; Ibsa ejjannoo Tuqaa 6 of Keessaa Qabu illee dabarfatanii jiru.
“Kaayyoo bilisummaa Oromoo bakkaan gahuuf jecha wareega barbaachisu kafalee ni qabsoofna,” kan jedhan barattooti kunneen, qabsoo Oromoo caalatti jabeessuuf akka hojjatan illee hubachiisaniiru.
Guyyaan Gootota Oromoo bara 1980 irraa kaasee, Ebala 15 yaadachuuf wagga waggaan kabajamaa jiraachuun beekamaadha.
Previous Previous post: 10 Life lessons we can all learn from Nelson Mandela
Next Next post: Seenaa Jaal Gaaddisaa Hirphasaa (1980-2006)